ASUS Pegasus 4S: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး ASUS စမတ်ဖုန်း | Androidsis
ASUS Pegasus 4S - ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး ASUS စမတ်ဖုန်း
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ ASUS က၎င်း၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်ပုံစံ ၁၈: ၉ ဟုကြေငြာခဲ့သည် အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအလယ်အလတ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ။
လာမည့်နေ့ရက်များအတွင်းဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည့်ဒီ terminal ၏အားသာချက်မှာ screen အပြင် fingerprint reader နှင့် dual camera တို့အပြင်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့က plug ကိုအကြောင်းကိုသိပ်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်နေ့လုံး device ကိုဝက်အူနိုင်ပါတယ်။
အသစ် ASUS Pegasus 4S ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ, ဝေဖန်ဖြစ်ခြင်း။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ Specs တွေကကောင်းမွန်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပါ။ ဒါ့အပြင် screen ကြီးကြီးနဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
နောက်ပြီးသင့်ကိုသူ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ASUS Pegasus 4S ကအရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်.
1 ASUS Pegasus 4S အချက်အလက်ဇယား
2 ASUS Pegasus 4S: ၅.၇ လက်မ ၁၈: ၉ Full HD + မျက်နှာပြင်ပါသောပထမဆုံး ASUS
4 Android 7.0 Nougat ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ!
ASUS Pegasus 4S အချက်အလက်ဇယား
ASUS ကို PEGASUS 4S
မျက်နှာပြင် ၅.၇ လက်မ HD + IPS panel (5.7 x 1440) ။ ၁၈: ၉ အမျိုးအစား
လုပ်ငန်းစဉ် Mediatek MT6750T Octa-core 1.5Ghz
ရမ် 3GB / 4GB
ချမ်ဘာ နောက်ဘက် - 16MP + 8MP ကင်မရာနှစ်ခုသည် autofocus နှင့် FlashLED ပါရှိသည်။ 1080p မျက်နှာစာ: 8MP
နှစ်ဆ SIM ဟုတ်ကဲ့
4G LTE ကို ဟုတ်ကဲ့
သိုလှောင် 32GB / 64GB
OS အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 152.6 x 72.7 x ကို 8.8mm 160g
ASUS Pegasus 4S: ၅.၇ လက်မ ၁၈: ၉ Full HD + မျက်နှာပြင်ပါသောပထမဆုံး ASUS
များသောအားဖြင့် ASUS ကုမ္ပဏီသည်မျက်နှာပြင်အချိုးအစား 16:9ရှိသည့်ဖန်သားပြင်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို terminal များယူဆောင်လာသည်။ မကြာမီကမှစျေးကွက်သို့မိတ်ဆက်ပေးသောစမတ်ဖုန်းများတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထသောအရာဖြစ်သည်။
ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်၊ ASUS Pegasus 4S သည် 18:9မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး ASUS စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောမာလ်တီမီဒီယာအတွေ့အကြုံရှိရန် Full HD + resolution ဖြင့်၎င်း၏ ၅.၇ လက်မဖန်သားပြင်ထဲသို့ပေါင်းထည့်သည်။
Display panel မှာ IPS နည်းပညာပါရှိပါတယ်, ငါတို့ ASUS Zenfone Pegasus3နှင့်အခြား ASUS မော်ဒယ်များထဲသို့ဝင်သောအတူတူပင်။
ဒါ့အပြင်ဒီကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုမျှတအောင်လုပ်ဖို့၊ ASUS Pegasus 4S တွင် 4030 mAh ဘက်ထရီပါရှိသည် ဒါကအတွက် အနည်းဆုံးပြtroubleနာကင်းသောအသုံးပြုမှုတစ်ရက်လုံးကိုသေချာစေသည်။
terminal ၏နောက်ကျောတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုရှာနိုင်သည် 16MP အဓိကအာရုံခံကိရိယာနှင့် 8MP အလယ်အလတ်အာရုံခံကိရိယာပါသည့်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့် autofocus နှင့် FlashLED တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 1080p (FullHD) ၏ဗီဒီယို resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်သည်။
ဒါ့အပြင်သူကတစ်ဦးရှိပါတယ် selfie နှင့် video chat များအတွက် 8 megapixel resolution ရှိသောရှေ့ကင်မရာ.
အရာအားလုံးနှင့်ဤအတူ ဒီ terminal ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ် ဒါကဘယ်နေရာမှာမဆို၊
ကင်မရာအောက်မှာပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုသော့ဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအတွက်။ မကြာသေးမီကအလယ်အလတ်အကွာအဝေးဆိပ်ကမ်းများတွင်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Android 7.0 Nougat ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ!
ASUS Pegasus 4S သည် Android N operating system ၏ကောင်းကျိုးများအားလုံးရရှိမည်ဖြစ်သည် ၎င်း၏စင်ကြယ်သောဗားရှင်း၌တည်၏။ ထို့အပြင်အနာဂတ်တွင်၎င်းကို Android 7.1.1 နှင့် Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်...
ASUS Pegasus 4S ကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်: RAM4GB ရှိပြီး 64 GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့်သိုလှောင်မှုနေရာ3GB နှင့်အတူ 32 GB RAM နှင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကိုရွှေ (ရွှေ) နှင့် Star Black (အနက်ရောင်) နှစ်ခုဖြင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
ASUS သည် Pegasus 4S ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ စျေးကွက်ထဲမှာတော့သေချာတယ်၊ နောက်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်ဤ terminal ၏စျေးနှုန်းကိုလူသိရှင်ကြားမပြသသေးသဖြင့်ယခင်မော်ဒယ်ဖြစ်သော ASUS ၏ဈေးနှုန်းကြောင့်ယူရို ၃၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းယခုအထိမည်မျှကုန်ကျမည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ZenFone Pegasus 300S
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ASUS Pegasus 4S - ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး ASUS စမတ်ဖုန်း
ကောင်းပြီ၊ ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်တွေရဲ့ဖက်ရှင်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအရမ်းကိုအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ငါဟာ Blackview S18 ရဲ့နောက်မှာရှိနေတယ်၊ ​​အခုအချိန်မှာသိပ်ကောင်းတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်၊ ​​ယူရို ၁၂၇ နဲ့စတင်နိူင်တယ်၊ ။
OnePlus 5T ကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်
The Honor 7X ကိုလာမည့်လတွင် "မယှဉ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း" ဖြင့်ရောင်းချမည်